Zvibvumirano zvina | Martech Zone
Muvhuro, June 4, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhasi manheru ndanga ndichikurukura neshamwari, Jules. Jules akapfuudza humwe huchenjeri kubva mubhuku, Zvibvumirano zvina, naDon Miguel Ruiz & Don Jose Luis Ruiz.
Sezvo nemazano mazhinji, yakanaka kwazvo, asi yakaoma kuisa mukuita. Hupenyu hwedu hwezuva nezuva hunoratidzika kunge hunodzinga kugona kwedu kwekuchengetedza zvinhu zvakaita seiyi yepamusoro pefungwa. Zvichida sezvo zviri zvina chete, tinogona kuzviita, zvakadaro!
1. Iva Asina Chinoshamisa neShoko Rako
Taura nekuvimbika. Taura chete zvaunoreva. Dzivisa kushandisa izwi kutaura pamusoro pako kana kuita makuhwa pamusoro pevamwe. Shandisa simba reshoko rako munzira yezvokwadi nerudo.
2. Usatora Chinhu Chero Iwe pachako
Hapana zvinoitwa nevamwe nekuda kwako. Zvinotaurwa nevamwe uye zvinoitwa ndezvekuratidzira kwavo chaiko, kurota kwavo. Kana iwe usinganetswe nemaonero uye zviito zvevamwe, iwe haugone kuve dambudziko rekusuwa pasina chikonzero.
3. Usaite Kufungidzira
Tsvaga ushingi hwekubvunza mibvunzo uye kutaura zvaunoda chaizvo. Taurirana nevamwe zvakajeka sezvaunogona kudzivirira kusanzwisisana, kusuruvara uye mutambo. Neichi chibvumirano chimwe chete, unogona kushandura hupenyu hwako zvizere.
4. Gara Uchiita Zvaunogona
Zvakanakisisa zvako zvichaenda kuchinja kubva nguva kusvika nguva; zvichave zvakasiyana kana iwe uine hutano zvinopesana neanorwara. Chero pasi pemamiriro ezvinhu, ita zvese zvaunogona, uye iwe unozodzivirira kuzvitonga, kuzvibata zvisina kunaka uye kuzvidemba.
Anonakidza kuraira. Ndinofunga ndine # 1 pasi, # 4 ndoda kusvika… # 2 ndakanaka pazviri, sezvo ndine chivimbo mandiri. # 3 inoda rimwe basa! Kutenda kuna Jules nekupfuudza izvi! Ndine rimwe basa rekuita.
Ndishevedze kana wabuda muBeta, Google Gears!
Jun 5, 2007 na6:29 AM
Zano rakanaka, Doug. Mazano akawanda anobatsira ekuzvibata ari nyore, uye sezvaunotaura, zvakaoma.
Jun 5, 2007 na7:20 AM
Doug. Inonzwika sebhuku rinonakidza. Waverenga wapedza here? Yakakodzera mutengo wekubvumidzwa kana wakapfupikisa matombo kubva mairi pano mune yako post?
Chokwadi mana hunhu hwekuvavarira. Uye, wobva wabatana zvakananga nekubloga.
Jun 5, 2007 na8:05 AM
Ndakaverenga bhuku iri kakawanda uye hwaive hupenyu kuchinja kekutanga, hupenyu huchisimbisa dzimwe nguva. Nepo misimboti iri nyore, kunyatsoisa mukuita (zvakadzama) muhupenyu hwedu hwepachedu uye hwehunyanzvi zvinotora chirango uye chishuwo chinoenderera kune kuzvivandudza. Ikozvino, ini ndichinyanya kunetseka nedivi remunhu uye iyi blog yeDoug kero iyo yakanyanya hunyanzvi / tekinoroji yehupenyu, denderedzwa redu resimba rakakura sezvatinoda kuti rive. Zvibvumirano zvina zvinowedzerwa mukati mebhuku uye rinotsanangura zvakadzama zvinoreva kune imwe neimwe chibvumirano.
Kutanga kwebhuku kunokweva zvishoma, asi kana yangopinda mu "nyama" yaro, ndakashandurwa ... uye ndokushandurwa. Dai munhu wese aikwanisa kushandisa misimboti iyi, isu wakaramba shandura nyika.
Jun 5, 2007 na8:32 AM
Zvamazvirokwazvo riri papfupi runyorwa rwangu rwemabhuku ekuverenga, Dawud! Ini handina kumbofunga nezve blogging (duh!), Asi iwe wakanyatso kurongeka - izano rakakura kune vanoblogi!
Jun 5, 2007 pa 5: 23 PM
hmm….pamwe ndichafanira kushanda nesimba papoint # 2 🙁
Jun 5, 2007 pa 9: 25 PM
Ichokwadi kuti izvi zvakaoma zvikuru. Zvingabatsira kufunga nezvazvo nenzira iyi. Hapana anogona kukuita chero chausiri. Saka, kana iwe ukandidaidza nemazita kana kundiudza chimwe chinhu chakaipa pamusoro pangu, hazvifanirwe kuve nechekuita nemabatiro andinoita pachangu - KANA ndakachengeteka mumunhu wangu. Apa ndipo pane dambudziko. Tinobvumira maonero evamwe pamusoro pedu kukanganisa nzira yatinozviona nayo, pane kungozvigamuchira pachedu kana kushandura zvinhu zvatisingadi kungoita b/c zvatinoda. Zvaunotenda zvinowanzoitika. Funga zvinhu zvakanaka pamusoro pako uye uchazvifarira; funga zvinhu zvisina kunaka uye haungazvifariri iwe pachako.
Hongu, ndakapomerwa kuva Pollyanna'ish……asi ndicho chinhu chinotungamira muhupenyu hwangu uye chiri kundishandira zvakanaka, kunyanya nhasi. 🙂
Jun 6, 2007 na4:18 AM
Zano rakanaka jule 🙂
ndotenda zvikuru !
Kutaura zvakaipa painternet zviri nyore. Ingo nyora chero chaunoda mubhokisi remhinduro… ..
Vanhu havatombofungi nezve zvingaite pane blogger…. 🙁
“Funga zvinhu zvakanaka pamusoro pako uye uchazvifarira; funga zvinhu zvisina kunaka uye hauzozvifariri iwe pachako."
Ini zvirokwazvo ndichatevera zano rako 🙂
Jun 6, 2007 na7:33 AM
Handikwanise kurumbidza bhuku rino zvakakwana – riri nyore kuverenga, uye rakakodzera kuverenga zvakare nguva nenguva kuti pfungwa dzako dzidzokere padzakarurama. Iri bhuku rakapihwa kwandiri makore akati wandei apfuura pandakanga ndiri kuburikidza ne "patch yakaoma" uye yakandibatsira kuzvisimudza. #2 Usatore Chero Chinhu Pachangu chakave nemhedzisiro yakakura pandiri nekubatsira pfungwa yangu yekuzvida.
Kurudziro yakanaka, Doug!
Shiri Dzesango Dzisingagumi
Jul 13, 2007 na1:55 PM
Chaizvoizvo kana uri kutyora chibvumirano #2 kana #3 unenge usiri Kuve Wakanaka Neshoko Rako (chibvumirano #1).
Kana iwe uri kutora chimwe chinhu iwe pachako unenge uchitaura zvinopikisana newe pachezvako. Izvi hazvina kukwana. Kana iwe uri kugadzira (kugadzira mupfungwa dzako) fungidziro dzinotungamira mukusawirirana saka iwe hausi kuve wakakwana futi.
Kutaura kwakanaka kweshoko rako kunodawo kuti uite fungidziro zvisina kunaka, uye kuti usaite matauriro anoita kuti utore zvinhu pachezvako.
Pakutanga kuverenga zvinoita sekunge Kuve Wakachena kuri nyore pane vamwe. Paunodzidza mapoinzi akakwenenzverwa unoona kuti zvibvumirano zvekugara #2,3, uye 4 zvinokutungamirira kuti uwane Kusagona.
Mamwe mashoko pamusoro peizvi pa http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/